Bit By Bit - Ethics - 6.4.2 Raxmaan
Raxmaan wuxuu ku saabsan yahay fahamka iyo hagaajinta profile halista / lacagta aad daraasadda, ka dibna go'aan haddii uu laayo dheeli saxda ah.
Warbixinta Belmont wuxuu ku doodayaa in mabda'a faa'idada leh ay tahay waajib saaran in cilmi-baarayaashu ay ka qaybqaataan, iyo in ay ku lug leedahay laba qeybood: (1) ma waxyeelo iyo (2) ugu badnaan faa'iidooyinka suurtagalka ah oo yaree waxyeellada suurtagalka ah. Warbixinta Belmont waxay raadinaysaa fikradda ah inaanay waxyeello u geysan dhaqan dhaqameedka Hippokratiga ah ee anshaxa caafimaadka, waxaana lagu sheegi karaa qaab xoog leh oo ay cilmi-baadhayaashu "ma aha inay dhaawacaan hal qof iyada oo aan loo eegin faa'idooyinka laga yaabo inay u yimaadaan kuwa kale" (Belmont Report 1979) . Si kastaba ha ahaatee, Warbixinta Belmont waxay sidoo kale qireysaa in barashada waxa faa'iido leh ay ku lug leedahay soo bandhigidda dadka qaarkood khatarta. Sidaa daraadeed, waajibka ah in aan waxyeello samaynin ayaa ka hor iman karta waajibka ah in la barto, cilmi-baadhayaasha ugu horreeya si ay go'aanno adag u gaaraan "marka ay xaq u leedahay in ay raadsadaan waxtarka qaarkood inkastoo khatarta ku lug leh, iyo marka faa'idooyinka ay tahay in la daboolo sababtoo ah Khatarta " (Belmont Report 1979) .
Ficil ahaan, mabda'a faa'idada waxaa loo fasiray in macnaheedu yahay in cilmi-baadhayaashu ay qaadayaan laba hab oo kala duwan: falanqaynta khatarta / faa'iidada iyo ka dibna go'aanka ku saabsan haddii khatarta iyo faa'iidooyinka ay ku dheelitiraan miisaan ku habboonaanta anshaxa. Nidaamkan koowaad wuxuu inta badan yahay arrin farsamo ah oo u baahan khibrad dhab ah, halka labaadna waa arrin anshaxeed oo khibrad qoto dheer laga yaabo in ay ka yar tahay, ama xitaa waxyeello leh.
Falanqaynta khatarta / faa'iidada waxay ku lug leedahay fahamka iyo hagaajinta halista iyo faa'iidooyinka daraasadda. Falanqaynta khatarta waa in ay ku jiraan laba waxyaalood: suurtogalka munaasabadaha khalkhalka iyo darnaanta dhacdooyinkaas. Natiijada falanqaynta khatarta / faa'iidada, cilmi-baaruhu wuxuu wax ka beddeli karaa naqshadeynta daraasadda si loo yareeyo dhacdooyinka munaasibka ah (tusaale, ka-qaybgalayaasha ka-qaybgalayaasha ah kuwa nugul) ama yareynaya darnaanta dhacdooyinka xun haddii ay dhacdo (tusaale ahaan la-talin oo ay heli karaan kaqeybgalayaasha codsanaya). Intaa waxaa dheer, inta cilmi-baarayaasha falanqaynta / faaiidooyinka ay u baahan yihiin in ay maskaxda ku hayaan saameynta shaqadooda ma ahan oo kaliya ka qaybgalayaasha, laakiin sidoo kale kuwa aan cidina wehelin iyo hababka bulshada. Tusaale ahaan, tixgelinta tijaabada by Restivo iyo van de Rijt (2012) saameynta abaalmarinta on editors Wikipedia (laga wada hadlay cutubka 4). Daraasadan, cilmi-baarayaashu waxay abaalmarin ku siiyeen tiro yar oo tafaftirayaal ah oo ay u arkeen inay u qalmaan oo dabadeedna ku darsadeen waxtarradooda Wicitaanka marka la barbardhigo koox koontarool ah oo u qalma tifaftirayaasha kuwaas oo cilmi-baarayaashu aysan bixin wax abaalmarin ah. Ka fikir, haddii, halkii laga siin lahaa tiro yar oo abaalmarin ah, Restivo iyo van de Rijt waxay daadadku soo rogeen Wikipedia oo leh abaalmarino badan. Inkasta oo naqshadani aanay wax u dhimaynin cid kasta oo ka qaybqaataha ah, waxay burburin kartaa dhammaan barnaamijka abaalmarinta abaalmarinta ee Wikipedia. Si kale haddii loo dhigo, marka aad sameyneyso falanqaynta khatarta / faa'iidada, waa inaad ka fekertaa saameynta shaqadaada oo kaliya ma ahan ka qaybgalayaasha laakiin adduunka oo dhan si ballaaran.
Marka xigta, marka halisaha la yareeyo iyo faa'iidooyinka ugu sarreeya, cilmi-baarayaashu waa inay qiimeeyaan haddii daraasaddu ay dheelitirto miisaan wanaagsan. Ururada 'Ethicists' kuma talinayaan soo-jeedin fudud oo ah kharashka iyo faa'iidooyinka. Gaar ahaan, khataraha qaarkood waxay sameeyaan cilmi-baaris aan la oggolaanin iyada oo aan loo eegin faa'iidooyinka (tusaale ahaan, Daraasadda Tuskegee Syphilis ee lagu sharraxay lifaaqa taariikheed). Si ka duwan falanqaynta khatarta / faa'iidada, taas oo inta badan farsamo, talaabadan labaad waxay tahay mid si qoto dheer leh oo xaqiiqda ah waxaa laga yaabaa inay kobciyaan dad aan haysan khibrad khaas ah oo khuseeya. Xaqiiqdii, sababta oo ah dadka ajnabigaa badanaa waxay dareemaan waxyaabo kala duwan oo ka imanaya kuwa ku jira, IRBs-ka Maraykanka ayaa looga baahan yahay in ay ku jiraan ugu yaraan hal baaris-bixiye. Marka aan waayo-aragnimadayda ku shaqeyno IRB, kuwan dibedda ah waxay ku caawin karaan ka hortagga koox-kooxeed. Sidaas darteed haddii ay dhibaato kaa haysato go'aaminta in mashruucaaga cilmi-baarista uu soo saarayo falanqaynta khatarta / faa iidaada ku haboon ma weydiiso asxaabtaada, isku day inaad waydiiso qaar ka mid ah baaritaanada shaqo la'aanta; Jawaabtoodu way ku yaabi karaan.
Dalbashada mabda'a faa'iidada ah saddexda tusaale ee aynu ku fakarayno waxay soo jeedinayaan isbeddelada laga yaabo in ay kor u qaadaan khatartooda halista / faa'idada. Tusaale ahaan, Falanqaynta Dareenka, cilmi-baarayaashu waxay isku dayi karaan inay baaraan dadka da'doodu ka yar tahay 18 sano iyo dadka laga yaabo in ay si gaar ah ugu yartahay inay si xun ugu falceliyaan daaweynta. Waxay sidoo kale isku dayi lahaayeen in ay yareeyaan tirada ka qaybgalayaasha iyagoo isticmaalaya hababka tirakoobka waxtarka leh (sida lagu faahfaahiyay si faahfaahsan cutubka 4). Intaa waxa dheer, waxay isku dayi lahaayeen in ay kormeeraan ka qaybgalayaasha waxayna u fidiyaan caawimaad qofkasta oo u muuqday in la waxyeeleeyay. Daraasada, Dhibaatooyinka, iyo Waqtiga, cilmi-baarayaashu waxay ku dari lahaayeen ilaalin dheeraad ah marka ay sii daayaan xogta (inkastoo nidaamyadoodu ay ansixiyeen Harvard's IRB, oo tilmaamaya in ay ku haboontahay dhaqanka caadiga ah wakhtigaas); Waxaan soo jeedin doonaa qaar ka mid ah talooyinka gaarka ah ee ku saabsan xogta sii-deynta ka dib markii aan qeexayo khatarta macluumaadka (qaybta 6.6.2). Ugu dambeyntii, in Encore, cilmi-baarayaashu waxay isku dayi lahaayeen in ay yareeyaan tirada codsiyada khatarta ah ee la abuuray si ay u gaaraan ujeedooyinka cabbirka mashruuca, waxayna ka saari karaan ka-qayb-galayaasha kuwaas oo khatarta ugu jira dawladaha xag-jiriinta ah. Mid kasta oo ka mid ah isbeddellada suurtagalka ah ee soo noqnoqonaya ayaa ku soo bandhigi doona mashaariicda mashaariicdaas, iyo himiladeenu maaha in la soo jeediyo in cilmi-baarayaashu ay sameeyeen isbeddeladan. Halkii, waa in la muujiyo noocyada isbeddelka ee mabda'a faa'idada leh ee soo jeedin kara.
Ugu dambeyntii, inkastoo da'da dijitaalku guud ahaan ka dhigtay miisaamida khatarta iyo faa'iidooyinka badan ee adag, waxay dhab ahaantii u sahlaysay cilmi-baarayaasha in ay kordhiyaan waxtarka shaqadooda. Gaar ahaan, qalabka da'da dijital ah ayaa si fudud u fududeynaya cilmi furan oo dib loo soo celin karo, halkaas oo cilmi-baarayaashu ay ka dhigayaan xogta cilmi-baarista iyo koodhka ay heli karaan cilmi-baarayaasha kale oo ka dhigaan waraaqahooda ay heli karaan daabacaadda furan ee furan. Isbeddelkan ku yimaadda cilmi-baaris furan iyo dib-u-kicin, iyada oo aan macnaheedu ahayn fudud, wuxuu bixiyaa dariiqa cilmi-baarayaasha si loo kordhiyo faa'iidooyinka cilmi-baaristooda iyada oo aan ka-qaybgalayaasha loo gudbin halis dheeraad ah (wadaagista xogta waa ka reeban in si faahfaahsan looga hadli doono qaybta 6.6.2 khatarta macluumaadka).